JINDONGCHENG လြှပျစစျကိရိယာ, LTD - ။ ကြှနျုပျတို့အကွောငျး။
ငါတို့ရှိသမျှသည်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စက်ကွေးသံလိုက်စာရွက်သတ္တုအတွက်အထူးပြု။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းဝန်ထမ်းများ, ပညာရှင်များနှင့်အင်ဂျင်နီယာများက ​ have an extensive knowledge of the equipment we sell. Our main objective is to understand your needs, to equip you with smart, lasting solutions for the fabricating challenges you face. We don't just sell the machinery that's offered, we service it.
WE ကျွန်ုပ်တို့၏သံလိုက်စာရွက် Metal ဘရိတ် KNOW!
JDCBEND ထံမှတစ်ဦးကသံလိုက်ဘရိတ်သင်ရိုးရာသတ္တုဘရိတ်အပေါ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပူးတွဲပုံစံမျိုးစုံလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်အခြားပစ္စည်းများအကြား, သံမဏိ, လူမီနီယမ်, ကြေးနီနှင့်ပလပ်စတစ်တင်နိုင်နိုင်ပါတယ်။ နီးပါးန့်အသတ်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖွင့်!
HVAC ဆိုင်များ, စက်မှုဇုန်အနုပညာစျေးဆိုင်များနှင့်ယေဘုယျစာရွက်သတ္တုလုပ်ကြံလီဆယ်မှုများ
ductwork, တြိဂံ, ကွဲပြားလေယာဉ်ပေါ်တွင်အခြားကွေး, ထိုကဲ့သို့သော scrolling မ applications များအဖြစ်လှည့်လည်ပစ္စည်းများနှင့်ပိုပြီးပြုလုပ်ခြင်း။
ဖွင့်ဒီဇိုင်း - အပွင့်လင်းထိပ်တန်းသငျသညျပူးတွဲသေတ္တာများသို့မဟုတ်တြိဂံအပါအဝင်စိတျကူးကွေးမဆိုကြင်နာ, ဖြစ်စေခြင်းငှါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။
အင်အား6တန်ချိန်နှင့်အတူသံလိုက် - သင်ကပွင့်လင်း concept ကိုဒီဇိုင်းအတွင်းကညှပ်နိုင်အောင်အဆိုပါအစွမ်းထက်သံလိုက်ရာဌာန၌ပစ္စည်းရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
ခြေမနင်းသို့မဟုတ်တွန်းအားပေး button ကိုထိန်းချုပ်မှု - ထိုသံလိုက်ဆွဲဆောင်ပါနဲ့ပစ္စည်းလမ်းပြအခမဲ့သင်၏လက်ထားခဲ့ပါ။
အသေးစားခြေရာ - ဤသို့ပွု-It-အားလုံးစက်သင့်ရဲ့ဆိုင်မှာအများကြီးအာကာသကိုတက်ယူမထားဘူး။
ဖုန်းဖြင့် 1 နှစ်အာမခံနှင့်တစ်သက်တာနည်းပညာပံ့ပိုးမှု - သင်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်စက်အကူအညီလိုအခါတိုင်း, ရှိသမျှသောလက်-အပေါ်စက်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ, ကိုယ်စားလှယ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းဖုန်းဆက်ပါ။
မပေးသင့်အဘို့အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်မော်ဒယ်သေချာ? 15959014950 / ကအီးမေးလ် (+86) မှာကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းခေါ် Give: anna@jdctool.com
ဘရိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေရှိပါသလား? ကျနော်တို့စျေးကွက်အပေါ်သံလိုက်ဘရိတ်၏အရှိဆုံးကျယ်ပြန့်လိုင်းတက်ရှိသည်။ သင်တို့အဘို့ရှာကြသည်စာရွက်သတ္တုဘရိတ်ကိုမတှေ့နိုငျပါသလော ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်စက် saler ဖြစ်ချင်သလဲ? ကျနော်တို့ထုံးစံအဖြစ်ကောင်းစွာတည်ဆောက်လုပ်ပါ။ တစ်ခုကျွမ်းကျင်သူ Email jdcbend@gmail.com.
"သင်တစ်စက်လိုအပ်ပါတယ်ကြောင့်မဝယ်ကြပါလျှင်, ထို့နောက်သင်သည်နောက်ဆုံးမှာသင်အဘို့ပေးဆောင်ပြီတှေ့လိမျ့မညျကမရှိကြပါဘူး။ " ဟင်နရီဖို့ဒ်။
Skype ကို: အန်နာ Luo အဘိဓါန်